Izinzuzo zeziphepho | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Yize kungavamile ukushiwo okuningi ngakho, izivunguvungu Ziyizimo zesimo sezulu, empeleni, ezinobuso obubili: obubonisa amandla ayo okubhubhisa, nobunye, esingabunaki kakhulu, okuyibo obusikhombisa uhlangothi oluhle kakhulu lwalesi siphepho. Eqinisweni, ngenxa yalezi zimo, amanzi angafinyelela ezindaweni lapho imvula incane khona, njengeNorth Carolina (United States).
Thola yiziphi izinzuzo zeziphepho.
1 Iziphepho zihambisa amanzi amaningi
2 Zilawula izinga lokushisa
3 Bafaka isandla ekunakekeleni amahlathi namahlathi ashisayo
4 Khipha ukushisa
Iziphepho zihambisa amanzi amaningi
Abagcini ngokuletha imvula enamandla kuphela, kodwa futhi nomoya unamandla anele okususa amanzi asuke endaweni eya kwenye. Ngokwenza kanjalo, uketshezi oluyigugu lungafinyelela ezindaweni lapho kushoda khona, ukuze nabalimi bazuze kukho.
Zilawula izinga lokushisa
Zinzisa izinga lokushisa kusuka enkabazwe liye ezigxotsheni (zombili iNingizimu neNothi), ngakho-ke zingabalawuli bezulu bemvelo. Ngaphezu kwalokho, nomthelela ekwehliseni izinga lokushisa ezindaweni ezishisayo okungahle kube ngaphezulu.
Bafaka isandla ekunakekeleni amahlathi namahlathi ashisayo
Futhi ngukuthi lezi zitshalo zidinga umswakama omkhulu oseduze nemvula eningi ukuze ziqhubeke nokukhula. Ngakho-ke, iziphepho zisiza ukugcina amahlathi emvula nezindawo ezishisayo ziluhlaza, ugcwele impilo.
Futhi khumbula ukuthi umoya udiliza phansi lezo zihlahla ezigulayo noma ezindala, ukuvumela abanye ukuba bathathe indawo yabo.
Iziphepho zivela olwandle olushisayo, okushisa kwalo kuphezulu (cishe ngama-20-22ºC). Lapho ingcindezi yasemkhathini iphansi, ulwandle olufudumele lukhiphela umusi emkhathini kwakha okuvuselelwa okuzungezisa okuphikisana newashi.
Iziphepho zingabukwa ngezindlela ezimbili ezihluke kakhulu. Kepha, noma kunjalo, kufanele zibhekwe njengoba zingadala umonakalo omkhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iziphepho » Izinzuzo zeziphepho